လက်စွဲတွင်ခုံစက်, စီးပွားရေးဇုန် CNC တွင်ခုံစက်, မိုးသည်းထန်စွာ Duty Flat အိပ်ရာ CNC ခုံစက်ပစ္စည်းရေးစင်တာ - ကွမ်ကျိုးတောင်ပိုင်းတွင်ခုံစက် Tools များကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကွမ်ကျိုးတောင်ပိုင်းတွင်ခုံစက် Tools များကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကုမ္ပဏီလီမိတက်မြို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်မြင့်နည်းပညာသောကွမ်ကျိုး Panyu ခရိုင်အတွင်းရှိတည်နေရာကွမ်ကျိုးတောင်ပိုင်းတွင်ခုံစက် Tools များ. အဆိုပါစက်ရုံထက်ပိုမိုဖုံးလွှမ်း 30000 စတုရန်းမီတာ. ဒါဟာကွမ်ကျိုးတက္ကသိုလ်အနီးဖြစ်ပါသည်, တကယ်တော့ကိုယ့်တဦးတည်းမြစ်နားကွဲကွာ. မြေအောက်ရထားလိုင်းကို No.4 တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိကြောင့်ယင်ကောင်ဆင်းသက်နှင့်မြေယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေ၏အကောင်းဆုံးအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်. သူမသည်ကျော်ရှိပါတယ် 20 ဒီဇိုင်းနှင့်လက်စွဲတွင်ခုံစက်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အနှစ်, မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ပြားချပ်ချပ်အိပ်ရာ CNC တွင်ခုံစက်, ပြားချပ်ချပ်အိပ်ရာစီးပွားရေး CNC တွင်ခုံစက်, အနည်းငယ်တာဝန်စောင်းအိပ်ရာ CNC တွင်ခုံစက်, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအားလုံးဖောက်သည်များအတွက် CNC တွင်ခုံစက်စင်တာနှင့်စိတ်ကြိုက်စက်.
360အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –1000မီလီမီတာစက်အရှည်
360အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –750မီလီမီတာစက်အရှည်
ကျွန်တော်တို့, ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဟာ worl ကျော်ထံမှမည်သည့်ဖောက်သည်များအတွက် OEM ဒီဇိုင်းနှင့်လိမ္မော်ရောင်လုပျနိုငျတောင်ပိုင်းတွင်ခုံစက် Tools များ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ဖြစ်စေ ISO9001 မှ TO အတိုင်းငါတို့စက်ရုံ run. ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်: ပထမ , ငါတို့သည်ငါတို့၏စက်ရုံဖွငျ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးနမူနာစစ်ဆေးခြင်းပြုပါ . ဒုတိယအ , ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ပြုပါ. နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်များအတွက်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စစ်ဆေးရေးပြုပါ. အပြင်ဘက်တွင်အစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း: ကျနော်တို့ကတခြားစက်ရုံထဲကနေမဝယ်တိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အစစ်ဆေးခြင်းပြုပါ.
24 ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်များအတွက်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအပေါ်နာရီ . ဆဲလ်ဖုန်း / Whatsapp / WeChat: +86 139 28187729
500အိပ်ရာ CNC တွင်ခုံစက်စင်တာ-350mm စက်အရှည်ကျော်မီလီမီတာလွှဲ
500အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –1500မီလီမီတာစက်အရှည်
500တွင်ခုံ-1500mm စက်အရှည် CNC အိပ်ရာကျော်မီလီမီတာလွှဲ
560အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –1000မီလီမီတာစက်အရှည်
ဘားလမ်းခွဲ CO65 သတ်မှတ်ချက်
ရေနံတွန်းဘားလမ်းခွဲ-bar ကိုပစ္စည်းအချင်းအကွာအဝေးØ8-Ø18, Ø18-O26, O26-O34, O34-O 42
350အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ–200မီလီမီတာစက်အရှည်
သင်၏ပရောဂျက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ engingeering များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းစွမ်းရည်.
ကွမ်ကျိုးတောင်ပိုင်းတွင်ခုံစက် Tools များကုမ္ပဏီလီမိတက် © 2022 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ sex dolls Japanese Sex Doll Adult Sex Dolls Muñecas sexuales Sexpuppen Bambole del sesso Poupées Sexuelles Секс куклы